UYAKHA NJANI IFOMU YOKUNGENA USEBENZISA ICHAKRA UI KWIIREACT APPS - IBHLOG
Uyakha njani iFomu yokuNgena usebenzisa iChakra UI kwiiReact Apps
Kudala ndisebenzisa eli thala leencwadi le-UI kwiprojekthi yamva nje kwaye ndicinga ukuba ukuyihlola ngakumbi kunokuba ngumbono olungileyo. Funda indlela yokwenza ifomu yokungena usebenzisa iChakra UI.
I-Chakra UI ilayibrari yecandelo lemodyuli yeeReact zokusebenza ezisebenzisayo Iimvakalelo kwaye Inkqubo yeStayile . Ngelixa usakha i-React app kuyanceda ukusebenzisa izinto ezizodwa ze-UI ukukhawulezisa inkqubo yokwakha.
Ithala leencwadi libonelela ngendlela efanelekileyo yokwenza izinto zokwenza isitayile kusetyenziswa izixhobo zokwenza isitayile. Umzekelo, icandelo leqhosha elivela kwi-Chakra UI linokubhalwa ngolu hlobo:
Kule posi, siya kwakha ifom yokungena usebenzisa i-Chakra UI. Kudala ndisebenzisa eli thala leencwadi le-UI kwiprojekthi yamva nje kwaye ndicinga ukuba ukuyihlola ngakumbi kunokuba ngumbono olungileyo. Nantsi into eza kuvela kwisiphumo sokugqibela kule demo:
Funda indlela yokwenza ifomu yokungena usebenzisa iChakra UI kwiiReact Apps. I-Chakra UI lilayibrari yecandelo lemodyuli yeeReact zokusebenza ezisebenzisa iMvakalelo kunye neNkqubo eSitayile.
indlela yokwenza unciphiso kubunye
Uyifumana njani i-imeyile esusiweyo kwi-aol
itemplate yefom yekhadi letyala html
uyithengisa njani i-safemoon kwi-wallet ethembekileyo
yenza into esebenzayo yokudala
Java fumana zonke iiklasi kwiphakheji
ikhowudi ye-morse yomthi wokubini